ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁)
phyu(pwintlay2010@gmail.com): ဘာတွေလည်းကွာ၊တော်တော်မှcboxထဲရေးချင်တယ်ဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့linkတွေပေးခဲ့။မကျေနပ်ဘူးဆိုmail ပို့ ပြီးပြောကြပါ။ဒီblog ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုဝင်တောင်မကြည့်နဲ့ ။လူဆိုတာယုံကြည်မူမတူဘူးဆိုအမြင်ပါမတူတော့ဘူး။ကျေးဇူးပြု
ပြီးငြင်းခုံတာကိုရပ်ပေးကြပါနော်။အရမ်းကိုဆွေးနွေးချင်ရင်တော့mailပို့ ပြီး ဆွေးနွေးကြပါလို့ တောင်းပန်ပါရစေ
ကိုယ်တော်ချောယောက်ဖ: ကိုယ်တော်ချောနာမည်နဲ့ကိုယ်တော်စောက်ပေါရေ မကျေနပ်ရင်ခြေမလာစုပ် ဒါပဲ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ဒီ့ပြင်ဘာသာတိုင်း သိနေကြပါပြီ မနိူင်နိုင်တာနဲ့ သူတပါးကို စော်ကားတတ်တာ သူတို့ အကျင့်ပါ)
Watcher: Please excuse for my hypothesis to Protozoa person. Certainly, it was over. My name is Dr.Min Aung and my wife name is Dr.Kyi Sin Thu. Email address is kyithuaung@gmail.com.
နောင်သူ: ယသော်ဒယာနဲ့တုန်းမှာ ဘုရားမဖြစ်သေးဘူး သိဒ္ဓိထ မင်းသားပဲရှိသေးတယ် ငါ့ကောင် ......ဘုရားမဖြစ်သေးဘူး.....ထားပါတော့ အဲဒါက ယုတ္တိတန်တယ် မတန်ဘူး မငြင်းလိုဘူး....ဒါပေမဲ့ လူတစ်ကာ ဖတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ...မင့်ညီမ မင့်အမေ လို မိန်းမတွေပါဖတ်နေတဲ့နေရာမှာ ဒါတွေ လာရေးနေရအောင် မင်းမိဘ မင်းအမေ မင်းအဖေ မဆုံးမခဲ့ဘူးလား...မင့်လို ပြောကြကြေးသားဆို အလ္လာ ဘယ်သူနဲ့ ကာမ ဆက်ဆံခဲ့လည်း မင်းတို့ ပိုသိမှာပေါ့........Mother F+++er လို့ပြောရင် ဘာလို့ မွတ်စလင် တွေက တစ်ခြားလူထက် ပိုနာရတာတုန်း.....တစ်ခြားလူနာတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အမြတ်တနိုး..ရိုသေလေးစားတဲ့ အမေနဲ့ နှိုင်းပြီး ဆဲလို့နာတာ..: မင်းတို့နာတာက အနာပေါ်ဒုတ်ကျလို့နာတဲ့ အနာကြီး......မင်းတို့ ဘိးဘေးဘီဘင် ဆင်းသက်လာတဲ့ နိုင်ငံကကောင်တွေ တောင် မယုံကြည်တဲ့ ကောင် မယုံကြည်ဘူး......ယောင်္ကျားကျတော့ မိန်းမအများကြီးယူခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပြီး : ဒီမိုကရေစီနီုင်ငံမှာရောက်နေပြီး ဒါကို မကြိုက်တဲ့ မွတ်စလင်မတွေက ငါတို့လည်း ယောင်္ကျား အများကြီး ဘာကိတ်စ ယူလို့မရမှာလဲဆိုတော့ သေမလိုပဲ .......ဥပဒေ ရှိနေလို့သာ ထမသတ်တယ်.......မင့်းတို့ ဘိုးဘေး ဘီဘင် ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ စောက်တစ်လွဲစကားတွေနဲ့ ပေါက်တတ်ကရ လာပြောမနေနဲ့ ခွေးသား ပြောရင်းစိတ်တိုလာပြီ (ဒါကတော့ မွတ်စလင်ဘာသာအား မိခင်ကို ပြန်လှည့်ပြစ်မှားတတ်သော ဘာသာလို့ စွတ်စွဲတတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ အကျင့်ပါ တကယ်မဟုတ်ပါ မွတ်စလင်ကျမ်းမှာ မိခင်ကို ပြစ်မှားတတ်ဖို့ မဆိုထားနှင့် တိရစ္ဆာန်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့သူကို ခဲနဲ့ ပေါက်သတ်ခိုင်းပါတယ် မယုံရင်ကိုရမ်ကျမ်းများမှာ ရှာဖွေလေ့လာနိူ်င်ပါတယ်)
ကြားလူ: ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ မွတ်စ်တွေကတော့ စောက်ပျင်းတွေချည်းပဲ...Ramandan မှာ ထမင်းလေး နာရီပိုင်းလောက်မစားရတာကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး ..Iftar လည်းကျရော ငတ်ပြတ်ပြီး ခွေးတွေနွားတွေလို စားကြတော့တာပဲဗျိုးးး...အလုပ်ထဲမှာလည်း တော်တော်ခိုကပ်ကြပြီး စောက်ပျင်းတော်တော်ကြီးကြတယ်...နှာဘူးကလည်းကျပြီး တဏှာရူးလိုက်တာလည်း..မိန်းမတွေ့ရင် ငမ်းငမ်းတက်...ရာဂကြီးကြတာများပါတယ်..ပြောရင်လည်းမကြိုက်ကြဘူးလေ... သူတို့တွေ ဘာဘွဲ့ဆိုလည်းယူတယ်ဆိုတာတဲ့ လဥ(ဂွေးစိ) ကြီးကို ထိုင်ရှိခိုးကြတာတဲ့.ဒါမှဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုပဲ..သေရင် သတင်းစာထဲက နာမည်မှ ဘွဲ့တတ်လို့ ရတယ်တဲ့.. သူတို့ဘွဲ့ယူရတာ လည်းမလွယ်လှပါလေ.. သနားစရာပါဗျာ...နောက်ပြီး သူတို့ဘာသာတိုင်းက အကြမ်းဖက်သမားများမဟုတ်ကြပေမယ့်.. အကြမ်းဖက်သမားလူယုတ်မာ လူဆိုး..လူ့ကောက်ကျစ်တွေ အားလုံးကတော့ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ.. သူတို့တွေချည်းဖြစ်နေတာ သိရတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ.ဘယ်လိုစိတ်ထား တတ်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာလဲလို့လေ..လူယုတ်မာ..လူရိုင်းနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတော်တော်များများကို လူ့လောကကို ဖျက်ဆီးနိုင်အောင် အခြေခံတွေများသင်ကြားပေးကြလေသလားမသိ..သနားညှာတာမှုမရှိ.ရက်စက်လိုက်ပါဘိ. ကိုယ်တော်ချောဆိုတဲ့မိစ္စာလည်လှီးသမား..သားသတ်သမားရေ ..ငါ့အီးမေးက powerofpeople@gmail.com ���ွာ..မင်းနဲ့ဆွေးနွေးချင်တယ်..အီးမေးထားခဲ့.ပုဆိုးခြုံထဲကနေအော်မနေနဲ့လည်လှီးသားသတ်သမား.လဥ ရှိခိုးတဲ့ကောင်ရေ..ဒါဘဲ
Monk: ဘုန်းဘုန်းဘာတွေလုပ်နေလဲ http://arnaryouegyi.blogspot.com/2009/12/blog-post_6897.html
email သိချင်တော့လည်း ပေးရတာပေါ့ Dr.Min Aung လည်းပါသွားကိုးကျွန်တော်ကလည်း discussion လုပ်တာကိုပဲ စိတ်ဝင်စား ကြိုဆိုပါတယ်... ကျွန်တော်ရဲ့ မေးခွန်းအား ဖြေဆိုထားသော နောင်သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ပထမကတော့
ဘုရားမဖြစ်သေးလို့ နောက်တော့ ဖြစ်တော့ ကိယ်ခန္ဒာက ကြီးသွားတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား အေးကိုယ်ခန္ဒာကို ကြီးကြီးလုပ်တတ်သောသူသည် မိမိရဲ့ အနာရောဂါကို ဇီဝကဆရာနဲ့ ကုသနေရတယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးထပ်မေး ခဲ့ မယ်နော်....
ရှင်ဂေါတမသည်။ ဗိမ္မိသာရမင်းကြီးဆောက်လုပ်လှုဒါန်းသောဝေဠုဝန်ကျောင်းမှာနေစဉ်အခါ။ နောက်ပါတပည့်သံဃာနှင့်တကွ။ ရာဇဂြိုလ်ပြည်ဆွင်းသို့ဝင်၍ ဆွမ်းခံသောအခါ။ လမ်းခရီးအကြား၌၊ ယောက်ဖတော် ဒေဝဒတ်သည်။ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ပေါ် ကနေ၍ ကျောက်တလုံးနှင့်လှိမ့်ချသောအခါ။ ခြေမတော်ကွဲ၍ သွေးပြည်တည်သောဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံမရပ်နိုင်၍ ဇီဝကဆရာကိုခေါ်ပြီးလျှင်။ ဆေးကုသမှုကိုရယူမှသာလျှင် ဝေဒနာမှသက်သာခြင်းအခွင့် ရလေသတည်း။ ၎င်းအပြင်လည်း၊ အသက်ရှည်သမျှကာလပါတ်လုံး ခဏခဏဦးခေါင်းကိုက်ခဲရခြင်း၊ ခါးခဏခဏနာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်၍ စမြင်းခံခြင်းအားဖြင့်၊ ဇီဝကဆရာခဏခဏ ဝမ်းကျဆေးတိုက်ရခြင်း၊ ဂေါတမကိုယ်တော်တိုင်က၊ ဖြစ်သမျှသောဝေဒနာအပေါင်းတို့ ကို ဇီဝကဆရာ၏ ဆေးတန်ခိုးအားဖြင့်ပါယ်ရှားရလေသည်။ ထို့ကြောင့်ရှင်ဂေါတမသည်မိမိ၏ကိုယ်ခန္ဓမာရ် မအောင်ကြောင်း ကိုယ်ရောဂါတောင် ဇိဝကဆရာနဲ့ ကုနေရကြောင်း ကို ပိဋကတ်ကျမ်းကသက်သေခံလေသည်။ ။ ကဲဖြေပေးကြပါအုံး ကိုယ်ကို ခန္ဓာကို ကြီးအောင် လုပ်တတ်တဲ့ ကိုယ်ရောဂါတော့ ဇီဝက ဆရာနဲ့ ကုနေရတယ် တွေးဆကာယုံကြပါဗျာ. မောင်ရင်တို့အားလုံးကို သတိတခုပေးခဲ့မယ် ကိုယ်မှာ အနာရောဂါများ ရှိရင် ဂေါတာမဆုတောင်းနေလည်း အပို ပါပဲ ..... Dr.Min Aung လည်း ပါနေတော့ အတော်ပဲ သူဆီမှာ emial နဲ့သော်၎င်း၊ လူချင်းတိုက်ရိုက်တွေ့၍ ကုသကြပါ. ဒေါက်တာပဲ ကုနိူင်ပါတယ်တဲ့ ဂေါတာမတော့ မကုနိူင်ပါ.....ဒါကျွန်တော် email လိပ်စာပါ messengerforbuddhist@gmail.com မေးခွန်းတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်ဗျာ လာပါအုံး ဆက်လက်စောင့်မျှော်တော်ပါခင်ဗျာရိုးရိုးတန်းတန်းစကားပြောတဲ့သူထက် ကုလားစကား ပါဠိလိုပြော မှ အထင် ကြီးတဲ့သူတွေ အတွက် ကုလားစကား ပါဠိစကားနဲ့ နောက်များမှာ ထက်ပြောပေးပါအုံးမယ်
ko thi la yan355@gmail.com:
Kill muslim and get rid of islam religion from the world for peace. CHOP MUSLIM GUY'S HEAD, RAPE MUSLIM GIRL LEE ALLAH, LEE MOHAMAAD,LEE MUSLIM LEE ISLAM ALLAH HU AKBAR LEE BEL WHAT THE HELL SUCK THE GOD IS GREAT, SUCK ALLAH DOG MUSLIM, DOG ALLAH, DOG MOHAMAAD, DOG ISLAM
MG: ယဉ်ကျေးစွာ ဆေးနွေးကြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ...ဆွေးနွေးကြသူများက မေးလ်လိပ်စာတွေ ပေးကြပြီးပြီ ဆိုတော့ မေးလ်ထဲမှာပဲ ဆွေးနွေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျာ
(yan355@gmail.com)ko thi la:
Hey MG aren't you buddhist? Shut up your mouth. OK?
ကိုသီလ...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမှန်အကန်ဆိုရင်MGပြောတာမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဆိုတာမရိုင်းပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောဆိုမှတခြားဘာသာဝင်တွေကအထင်မသေး မှာပေါ့။mail တွေပေးထားပြီး ပြီဆိုတော့ ဆွေးနွေးမှု့ကို mailတွေကတဆင့်လုပ်ကြပါနော်၊ကိုပီတာကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်mail ထဲကိုပို့ပြီးဆွေးနွေးပါနော်။
ကိုယ်တော်ချော: ကျွန်တော်သည် နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ မေးခွန်းများ လာရောက်မေးသောလည်း ဖြေဆိုနိူင်ခြင်း မရှိကြပါ. သူငယ်ချင်းကို phyu အား စကားနည်းနည်းပြောပါရစေ မှားတယ်ထင်ရင် ဘယ်ဘာသာမဆို စွန့်လွှတ်နိူင်တဲ့ စိတ်ကို မွေးပါ မှန်တယ်ထင် ရင် ဘယ်ဘာသာမဆို ကိုးကွယ်လက်ခံနိူင်တဲ့ စိတ်အား မွေးပါ... သူငယ်ချင်းတို့အား ပြောချင်တာကတော့ အဓိကရန်သူကတော့ ဘုန်းကြီးပါပဲ သူတိူု့တွေက ကွမ်းလေးတမြုံမြုံနဲ့ ခန့်ခန့်ဆန့်ဆန့်ကြီးနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာစကားတွေနဲ့ မဟုတ် တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မှ အခြေခံပြီး တပါးသူရဲ့ ဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် လုပ်ကြံလီစယ်ပြီး ပြောမယ် ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အမျိုးစပ် ကိုယ်ရဲ့ ဘာသာအမှားအယွင်းဆို နည်းနည်းမှ ထုတ်ဖော်ပြောချင်းမရှိဘဲ ထိန်ချန်ဝှက်ထားတတ် တယ်။ သူတို့တွေဟာ ဘာနဲ့ တူလဲဆို လောကကို မိစ္ဆာဆရာများလိုပါပဲ သူတို့ အာဏာတည်တံ့ဖို့ မဟုတ်မမှန်တဲ့ စကားတွေနဲ့ သိမ်းသွင်း နေတတ်သော အထင်အရှားပင် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါsuggestion ကိုmail ထဲကိုပဲပို့ပေးပါ။ကျေးဇူးပဲနော်
aung aung aungthiha2009@gmail.com
ုဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံဖြစ်တဲ့ ရှင်တော်ဂေါတမဟောသော ခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ တရားကို ဖန်ဆင်းရှင်တို့ (မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဖန်ဆင်းပေးလို့လူဖြစ်လာရပါတယ်လို့ ) လက်ခံထားသူတို့အဖို့ (ရှင်တော်ဂေါတမကိုယ်တိုင် ဦးခေါင်းကိုက်ခဲရခြင်း၊ ခါနာခြင်း၊ တနည်းဆိုရရင် ခန္ဓာရှိလို့ ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတာကို) နားလည်ဖို့ရန် ဥာဏ်မှီမယ်မဟုတ်လို့ အကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါ။ ဘာသာတစ်ခုမှာ ဘာတွေပါတယ် ဘာတွေဟောတယ် မှန်၏ မှား၏ ဆိုတာတွေကို တစ်ခုချင်း ဆန်းစစ်နေလို့မရပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစီးကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်များနင့် တိုင်းတာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကြောင့် လူအများသေကြေပျက်စီးရပါတယ် စစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ပွားရပါတယ်ဆိုတာ သမိုင်းမရှိခဲ့ဘူးပါ (အစ္စလာမ်မှာတော့ များလွန်းလို့ ဥပမာ မပေးနိုင်တော့ပါ) ။အဆုံးဆိုရရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကြောင့် လူတဦးတယောက်ချင်းအနေနှင့်လည်း ဒုက္ခရောက်စရာမရှိပါ (ဥပမာ -နိုင်ဂျီးရီးယားကုလား Umar Farouk AbdulMutallab လိုပေါ့)ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို အန္တရာယ်ပေးသော ဘာသာမဟုတ်ပါ။
ကြားလူ: ဟုတ်တယ်လေ..ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်သမားလူယုတ်မာတွေဘယ်ကထွက်..အဲ့ဒီ့ဘာသာကထွက်..လောကကိုဖျက်နေကြသတဲ့လေ...ဗုဒ္စဘာသာမှာ အစဉ်အလာနဲ့ အထောက်အထားပြစရာတွေ က အခိုင်အမာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိပါကြပါတယ်..သူတို့ေးသဖြစ်တဲ့ အာဖကန်မှာတောင် တောင်ပေါ်မှာရုပ်ပွားတော်နှစ်ဆူထုထားတာတွေ့လို့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့
ကမ္ဘာကအသိပဲ မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာ ..သဘောထားသေးသိမ်မှုပေါ့လေ..ထားပါတော့..ဒီတော့ကာ ကိုယ်တော်ချောတို့ဘာသာမှာကော ပုံနှိပ်တိုက်မှာ ဈေးပေါပေါနဲ့ အချိန်မရွေးရိုက်လို့ရ(သို့) ခပ်ပေါပေါကော်ပီကူးလို့ရတဲ့ ကျမ်း
ကလွဲလို့..တစ်ခြား အဲ့ဒီ့တမန်တော်ဆိုတဲ့သူသုံးခဲ့တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတောင် ပြစရာရှိရဲ့လား..အထောက်အထားအဖြစ်ပေါဗျာ..ဥပမာ သူပေါက်ခဲ့တဲ့ သေးအိုးလိုဟာမျိုးပေါ့.. အဲ့သလိုဆိုရင်.. စိတ်ကူးနဲ့မိရိုးဖလာ မှန်းဆ ပြီးယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက် ရမ်းသမ်းကိုးကွယ်နေရတာထက်စာရင် အဲ့ဒီ့သေးအိုးလေးကို ကန်တော့ရတာပိုကောင်းတာပေါ့..အထောက်အထားဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်နော..Seeing is believing တဲ့...ဘယ်လိုသဘောရလဲ
ကြားလူ(၂) မေးရအုံးမယ် မှတ်ပုံတင်နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မှာရှိတဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ကော ဖျက်ပစ်သေးလား
်ကိုယ်တောချော ဖြေလေ လျှာအမဲနဲ့လျှောက်ပြောမနေနဲ့ နင်ဘာမှတရားဝင်လုပ်လို့မရဘူး ငါကနင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တာ
ko thi la (yan355@gmail.com)
Hi all my buddhist brothers and sisters, don't chat with those who are the most dangerous people Chop muslim guy head' chop muslim guy head and rape muslim girl I am waiting any fighting with burmese and muslim . At the time I will go back and kill them
တကယ်တော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ အကြမ်းဖက်ဖို့အတွက် လုံးမသွန်သင်ထားပါဘူး အစွန်းရောက် သမားတွေသာ ဒါမျိုးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ aung aung: ပြောသလိုဆိုရင် DKBA ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ခုတည်းသောတည်ရှိနေတဲ့ ဘာသာရေးစစ်တပ်ပါ ဘာသာ သာသနာအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့ သူတို့ဟာ လူများစွားကို သတ်ဖြတ်ဒုက္ခပေးနေတာတော့ အားလုံးအသိပါ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူသတ်ဖို့ ဘုန်းကြီးက သေနတ်ကို မန်းမှုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပါရှိလား ဒီမှာကြည့် လူသတ်ဖို့ ဘုန်းကြီးက သင်ပေးနေတာ http://www.zwegapin.com/NEWS%20001/Chick%20the%20wippen%5B1%5D.jpg ပြောချင်တာက ဒီလို တလွဲလုပ်တဲ့လူတွေဟာ ဘာသာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ ကြားလူ(၂) မေးထားက အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ ပြစရာအထောက်အထားများစွာရှိပါတယ်။ ကုမ်ရမ် ကျမ်းစာထဲမှာ ပါရှိတဲ့နေရာတွေဆို အခုထိရှိနေတာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
aung aung (aungthiha2009@gmail.com)
မူဆလိန်အစွန်းရောက်ဆိုတာလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအယူဝါဒတွေကနေ ပေါက်ဖွားလာသော အသီးအပွင့်များပါ ၊ အဆိပ်ပင်မို့လို့ အဆိပ်သီးသီးတဲ့သဘောပါ ၊မဆိုင်ဘူးငြင်းမရပါ မူဆလိန်အစွန်းရောက်ဆိုတာလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအယူဝါဒတွေကနေ ပေါက်ဖွားလာသော အသီးအပွင့်များပါ ၊ အဆိပ်ပင်မို့လို့ အဆိပ်သီးသီးတဲ့သဘောပါ ၊မဆိုင်ဘူးငြင်းမရပါ
messageဖြေထားလိုက်တဲ့ အဖြေက တကယ်ကိုအားရစရာပါလား ဂေါတာမအကောင်က အဲ့လောက်ထိတောင် ကြီးလိုက်ကြီးလို့မေးတော့ ပထမက လူသဘာဝပဲ ရှိသေးတယ် နောက်တော့ ဘုရားဖြစ်သွားလို့ အကောင်ကြီးသွားတယ် နောက်ဂေါတာမ ကိုယ်တိုင် ဝေဒနာခံစားနေရပါလားလို့ ပြောတော့ သူဟာခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ခံစားတယ်လို့ aung aung က ဖြေတယ်နော်.... ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ဘယ်အချိန်ကာလမှ ဝေဒနာခံစားမူဒဏ်ကို လွှတ်မြောက်သွားလဲ ကျွန်တော့် အထင်တော့ နိဗ္ဖာန်ရောက်တဲ့ ထိတိုင် ဝေဒနာခံစားနေရမှာပဲ Dr.Min Aung လည်း ရှိနေတော့ အတော်ပဲ ဒေါက်တာတော့ နတ်ပြည်လား ငရဲပြည်လားမသိပါ ရောက်မှာ သေချာတယ် ဂေါတာမ ရှိတဲ့ အရပ်ကို ရောက်မှာပါ.... ဒေါက်တာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားကို ဒေါက်တာကိုယ်တိုင်ကုသပေးနိူင်တာပေါ့ ဟားဟား ဟုတ်ပြီလား နောက်ဆုံး ဘာပြောချင်လဲဆို ရောဂါ သည်တယောက်ကို ကိုးကွယ်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူသည် ဘုရားမဖြစ်သည့်အပြင် သာမာန်လူတယောက်တို့ ခံနိူင်သော လောကဒဏ်ကိုပင် သူမတွန်းလှန်နိူင်ပါ။ သူဟာ အသက်ရှင် ကာလပတ်လုံး ခဏခဏဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်.... ဘယ်တော့မှလည်း ဘုရားဖြစ်တယ်လို့လဲ မဝန်ခံဖူးဘူး ဒါကို ကိုရွှေမြန်မာတို့က ဂေါတာမက နှိမ်ချခြင်းကြီးမားတာပဲ သူကိုယ်သူတောင် ဘုရားဖြစ်တယ် မဝန်ခံဖူးဘူး ဒါကို ကိုရွှေမြန်မာတို့က ဂေါတာမက နှိမ်ချခြင်းကြီးမားတာပဲ သူကိုယ်သူတောင် ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ မပြောဘူးဟုဆို ကြသေးတာကို တွေရပါတယ်... ရီလည်း ရီချင်မှီပါတယ်..
မောင်ရင်တို့ကို ရှင်းအောင် ပြောပြမယ် ဥပမာဒေါက်တာ မင်းအောင် က ကျွန်တော်(ဒေါက်တာ) နာမည် ဒေါက်တာမင်းအောင်ပါလို့မိတ်ဆက်မယ် ..... ဟင်း မဟုတ်ဘူး မောင်ရင်တို့ က ကျွန်တော်(ကိုယ်တော်ချော) ကိုပေါ့နော် ကိုယ်တော်ချော ဆိုတာ ဒေါက်တာမင်းအောင် ဖြစ်ရမယ်.... ဟိုမှာ ကြည့်ပါလား သူဟုတ်လို့ပေါ့ သူဘာမှမပြောဘဲ ပါးစပ်ပိတ်နေတာ ဒါနဲ့ထပ်တခါ ဒေါက်တာမင်းအောင်က ကျွန်တော်(ဒေါက်တာ)နာမည် ဒေါက်တာမင်းအောင်ပါ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့က မင်းမဟုတ်ဘူး ဟိုမှာက ဒေါက်တာမင်းအောင်အစစ်ကွာ အမှန်မှန်က ကျွန်တော်(ကိုယ်တော်ချော)ဟာ ဒေါက်တာမင်းအောင်အစစ်မဟုတ်ပါ ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်(ကိုယ်တော်ချော) ကို ဒေါက်တာလို့ ထင်လည်းနည်းတဲ့အဆင့်လားဗျာ ဆိုပြီး ပါးစပ်ပိတ်ပြီး အရူးခန်း၇ိုက်နေတာကို နားမလည်နိူင်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို အရူးပဲလို့ ပြောပါရစေဗျာ။ ဒီအတိုင်းပါပဲ ဂေါတာမက သူ့ကိုယ်သူဘုရားဖြစ်တယ်လို့ မခံဝန်လျက်ပင် ကိုးကွယ်နေကြသောမိတ်ဆွေတို့အား တကယ်ကို ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
ဘုရားအစစ်အမှန်သာလျှင် ငါသည်ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ပြောရမည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ပြောရဲရမည်... ခင်ဗျားတို့ပြောသလို့ မွတ်စလင်မ်ဘာသာမှ ဘာသေးခွက်လည်း မရှိပါ... မွတ်စလင်တို့ ခရစ်ယာန်တို့ဟာ မိမိလက်နဲ့ လုပ်သော ရုပ်တုစဉ်းတု ပြုလုပ်ကိုးကွယ်ခြင်းမကြပါ... ရုပ်တုစဉ်းတုပြုလုပ်ကိုးကွယ်တာ ဟိန္ဒိူနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်မျိုးပဲ ရှိပါတယ်...နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အကောင်းဆုံးဆုကို ရ၇ှိရသော အကြောင်းရင်းကို ပြောပါအုံးမယ်. အခုသူတို့ လုပ်တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ ဘယ်သူမှလည်း စိတ်ဝင်းစားခြင်းမ၇ှိပါဘူး... ခရစ်ယာန်ကို ပေးရင် မွတ်စလင်မ် အစွန်းရောက်များဟာ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်ကိုပေးရင် ခရစ်ယာန်တွေ က မကျေမနပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှောင်လွဲ၍ ပေးခြင်းအား free မဖြစ်ကြပါနဲ့ ...
Posted by messenger at 4:45 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, အမေးအဖြေ, ရောဂါသည်လေး ဂေါတာမ
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၂)